Tirada na soo booqday.	Maanta31723shalay36906Isbuucaan114208Isbuucii hore313158Bishaan825544Bishii hore985537Maalmaha oo dhan4643714Hadda Waxaa toos ugu jiraan: 160 guests Your IP: 184.72.184.104 , Today: May 20, 2013	Sh.CaliDheere“ Hadii aysan Soomaalidu manta Jihaadin Kismaayo waxay la mid noqonaysaa Gaarisa iyo Madheera” Dhagayso.
Written by Maamul on 03 October 2012. Afhayeenka Xarakada Shabaabul Mujaahidiin Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere oo shir Jaraa'
Dagaallo Ka Dhacay Duleedka Muqdisho.
Written by Maamul on 03 October 2012. Weerar xoogan ayay xalay Ciidamada Mujaahidiinta ku qadeen FariisimoMaleeshiyadka DF-ka iyo kuwa Shisheeye Qaraxyada Oo Ku Batay Magaalada Kismaayo.
Written by Maamul on 03 October 2012. Magaalada Kismaayo oo ka mid ah meelaha Cadowga gacanta u galay ayaawaxaa xalay gilgilay qaraxyo kala Warar Sheegaya in Lafaagay Lafihii Cabdullaahi Yuusuf.
Written by Maamul on 03 October 2012. Wararka ka imaanaya Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaMudug waxay sheegayaan in xalay Mashruuca Turkiga ee Somaaliya Oo Gobolada dhexe laga diiday.
Written by Maamul on 03 October 2012. Faah faahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar kooxo hubeysan ku qaadeen saraakiil katirsan hay'
Roobab Daadad Watay oo Galguduud iyo Hiiraan Ka Da'ay.
Written by Maamul on 03 October 2012. Roobabka Dayrta ayaa si rasmi ah uga curtay intabadan gobolada dalka Somaaliya kadib muddo sedax bilood Weerar Lagu Gubay Saldhig Boolis Oo Gaarisa Ka dhacay.
Written by Maamul on 03 October 2012. Khasaara xoogan ayaa ka dhashay weerar hubeysan oo xalay saqdii dhexe lagu qaaday bartilmaameedyo gaar Daawo: Mu'assasada Al-Kata'ib oo soo saartay Filim Cusub oo ka hadlaya Hormarinta Mashaariiceed ee ay mujaahidiintu qabteen. Written by Maamul on 02 October 2012. Mu'assasada Warbaahinta Al-Kataa'ib ayaa soo saartay Filim Muuqaal ah oo ku saabsan dayactirka Buundooyin Qaraxyo Kismaayo Gilgilay iyo XSHM Oo sheegatay.
Written by Maamul on 02 October 2012. Weerarkii ugu horreeyay ayaa lagu qaaday cadawga huwanta ah ee ku duulay magaalada Kismaayo xarunta Kismaayo Shalay iyo Maanta…? (Qalinkii Liibaan Jeexoow).
Written by Maamul on 02 October 2012. Saddex maalmood ka hor ayay ciidamada mujaahidiinta Soomaaliya dib uga gurteen magaalada Kismaayo ilaa Xasan Sh Maxamuud iyo Jawaari oo gaaray magaalada Baladweyne.
Written by Maamul on 02 October 2012. Madaxweynaha DF, Guddoomiyaha Baarlamanka iyo xubno kale ayaa maanta barqadii u duulay Magaalada Baladweyne Amaanka magaalada Kampala oo cabsi laga soo sheegayo.
Written by Maamul on 02 October 2012. Magaalada Kampala xarunta dalka Ugandha ayaa laga soo sheegayaa cabsi balaaran oo ay taliska ciidamada Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta safar ku tagayo magaalada Baladweyne.
Written by Maamul on 02 October 2012. Madaxweynaha DF Xasan Sheekh oo maalintii shalay ahayd ka baaqday safar u qorsheysnaa inuu ku tago magaalada Sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka PS-ta DF oo Muqdisho lagu dilay.
Written by Maamul on 02 October 2012. Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in lagu dilay sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka Mahiga oo Xasan Sh Maxamud ku cadaadinaya in R/Wasaaraha cusub lasiiyo beesha Majeerteen, Farmaajano uu daaqadda ka baxo.
Written by Maamul on 02 October 2012. Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Augustine Mahiga oo ku sugan Saldhiga maleeshiyada DF ee degmada Balcad oo xalay qaraxyo lala beegsaday.
Written by Maamul on 02 October 2012. Saldhig ay maleeshiyaadka DF ku leeyihiin degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe ayaa xalay lala beegsaday Axmed Madoobe iyo Barre Hiiraale keebaa ku soo hormari doona Kismaayo?
Written by gobal on 02 October 2012. Bishii September 2008-dii waxey Mujaahidiintu Kismaayo kala wareegeen Barre Hiiraale iyo maleeshiyaadkiisii Cadowgii Kismaayo galay oo dib uga baxay, waa maxay sababtu?
Written by gobal on 02 October 2012. Wararka saaka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in cadowgii shalay Kismaayo ay ilaa Sh.Abu Cabdalla “ Tallaabo adag ayaan ka qaadi doonaa Isbaarooyinka lasoo dhigay inta u dhaxaysa Afgooye & Marko”. Dhagayso.
Written by Maamul on 01 October 2012. Waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Sh.Hoose Sh.Naxammad Abu Cabdalla oo maanta shir jaraa’id qabtay ay
Ciidamadii Huwanta oo cagta dhigay ciidda Kismaayo.
Written by gobal on 01 October 2012. War hadda naga soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa xaqiijinaya in gudaha magaaladaas ay galeen goor dhaweyd DHAGEYSO: Sheekh C/qaadir Muumin oo ku baaqay in Shacabku ay ka qeyb qaataan dagaalka Jihaadka ah. Written by Maamul on 01 October 2012. Sheekh Cabdulqaadir Muumin Yuusuf ayaa ka hadlay duulaanka ciidamada Kenya ee wilaayada jibooyinka iyo Khilaaf Kismaayo ka soo shaac baxay. Written by Maamul on 01 October 2012. Waxaa soo shaac baxay durbadiiba colkii ku soo duulay magaalada Kismaayo oo isku khiklaafay siyaasad Saraakiil Kenyaan ah Oo Gaarisa Lagu Toogtay Kadibna Hubkii ay wateen laga qaatay.
Written by Maamul on 01 October 2012. Faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa Saraakiil ka tirsan Booliska Kenya oo xalay lagu dilay m
Ammaanka Baydhabo Oo Faraha Ka Baxay.
Written by Maamul on 01 October 2012. Qaraxyo khasaare dhaliyey oo xalay hareeyey magaalada Baydhabo eeWilaayada Islaamiga gobolka Bay.
Start«71727374757677787980»End	Si Fudud ubaro Qur'aanka Adigoo Joogo Gurigaaga Online Riix Halkan